Xoolaha | February 2020
Doofaarka maanta waa kuwa ugu caansan iyo kuwa caanka ah. Maxay tahay sababta? Haddii aad doofaarro ku dhalatay, markaa waxaad leedahay baruur, hilib, taas oo aan dhab ahaan ahayn mid aan shisheeye ahayn badankeeda aadanaha. Iyada oo dhan tan doofaarka, waxaad kaloo kasban kartaa. Laakiin, ka hor inta aadan go'aan ka gaarin tallaabada doofaarrooyinka taranka, waxaa jira had iyo jeer su'aasha hadalka: taas oo ku habboon in ay doortaan?
Caleemaha casaan-gashan ee doofaarrada
Ka mid ah tirada badan ee doofaarka doofaarka waa arrin aad u adag in la helo kuwa u qalma labadaba qaabka waxqabadka, xaaladaha la qabsashada cimilada, iyo cuntada loo baahan yahay. Sidaa darteed, ka hor inta aan la bilaabin doorashadan, waxaa ugu horreyntii qiimeynaya qiimeeynta awoodaada iyo baahidaada, kadibna markaa qiimeynaya nooc kasta oo jinsi ah sifooyinka gaarka ah.
Doofaarka gudaha: meesha laga bilaabo si loo gaaro natiijooyin sare?
Helitaanka hilibka doofaarka tayo sare leh ee guriga jooga ma aha mid aad u adag. Waxaa intaa dheer, dad badan ayaa u yimid go'aanka ah in ay ka shaqeeyaan soosaaridda doofaarka gudaha, gaar ahaan haddii ay si joogta ah u soo galaan hilibka hilibka iyo "maaha wax cusub oo cusub". Sidaa darteed, waayo-aragnimada xoolaha noocan oo kale ah ayaa la uruuriyay aad u ballaadhan, taas oo macquul ah xitaa marxaladda fikradda ah in si fiican loo tababbaray, iyo sidoo kale in lagu barto faa'iidada iyo khasaarinta taranta taranka.
In nolosha tuulada ee dadka tuulada, xayawaanka ugu caansan waa sac. Waxaad qiyaasi kartaa xayawaan ay ku jiraan xayawaan duug ah, lo'da, riyaha, doofaarka, iyo xayawaanka kale. Dunida, weli wali waa sida wanaagsan. Waxay ku taallaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka, Carruurta sidan oo kale ah waxay u egtahay mid aad u wanaagsan, sababtoo ah qaar ka mid ah, sida wacan waxay bixisaa fursad ay ku arkaan xayawaanka beeraha markii ugu horeysay.
Xayawaanka noocan oo kale ah sida lo'da ayaa muddo dheer loo tixgeliyay inuu yahay mid ka mid ah kuwa wax ka taraya dhammaan quruumaha. Dalalka qaarkood, xayawaankan waxaa laga arki karaa calaamadaha gobolka. Iyo Hindiya, guud ahaan, lo'da waxaa loo tixgeliyaa xayawaan xayawaan ah. Wakhtiga maanta waxaa jira noocyo farabadan oo ah lo'da. Xayawaankani waxay kor u qaadaan ma aha oo kaliya waxyaabaha caanaha laga sameeyo, laakiin sidoo kale hilibka.
Doofaarka quudinta: waxaan samaynaa cuntada ugu fiican uguna dooro tiknoolojiyada saxda ah.
Qolalka, khayraadka iyo xamaasada, aad bay u fududahay in guriga laga soo qaado doofaarro. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii aad samaysay go'aankaas, marka hore waa inaad ka taxadartaa waxa aad ku quudineyso xayawaankaaga. Ka dib oo dhan, inkasta oo xayawaankani aanu ku dhaafeynin quudinta la siiyay, haddii aad rabto inaad hesho natiijo sare, waa inaad si taxadar leh u sameysaa cunto.
Caadi ahaan doofaarrada ayaa la kiciyaa si ay u soo saaraan baruur. Laakiin weli, hilibka doofaarku ma laha nafaqo iyo dhadhan. Hilibka doofaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu kariyo cuntooyin badan oo adduunka ah, kaliya Muslimiintu ma cunaan. In caan ku ah, waxay la tartamaysaa digaag, laakiin dambe ayaa aad uga liita doofaarka ee juicyiness.
Sida loo iibsado lo'da "saxda ah"
Ma fududa in aad hesho lo'da oo aad maanta sii haysato sida aad u malayn karto. Ka dib oo dhan, xayawaankan wuxuu u baahan yahay daryeel ku filan oo taxadar leh iyo kharashka dhaqaale ee dayactirka. Laakiin dhibaatooyinkan ma joojinayaan jimicsi hiwaayadlayaal ah, oo haddana go'aansaday in ay iibsadaan lo'da oo ay ku degaan mooskooda. Laakiin ka hor inta aadan iibsan tiro yar oo wakiil ah ee lo'dadan, waxaad u baahan tahay inaad barato shuruudaha ay tahay in lo'da kasta la qiimeeyo.
Dhulkeena waxaa ku yaal caws iyo qurxiyo qurxoon, jawigeena waa mid khafiif ah, wax walbana waxa loola jeedaa inaysan jirin wax ka horjeeda lo'da lo'da sii kordhaya. Ganacsatadaani wax faa'iido ah uma leh mulkiilayaashooda. Si ay u koraan lo'da hilibku uma baahna kharashyo badan. Waxaa jira noocyo badan oo lo 'lo', laakiin in this article waxaan ka sheegi doonaa oo ku saabsan shiidaalka Shorthorn ee lo'da.
Ku ilaalinta lo'da ee qoysku waa mid faa'iido leh, maxaa yeelay xayawaankani wuxuu ku farxi karaa qoyska oo idil waxtarka caanaha leh. Si kastaba ha noqotee, si ay u helaan waa muhiim maaha oo kaliya inaad ilaaliso oo aad quudiso xayawaankaaga, laakiin sidoo kale si fiican u caano. Waxay u muuqan lahayd - arrin sahlan, laakiin xaddiga caanaha iyo xaaladda guud ee jidhka lo'da ayaa aad ugu tiirsan farsamooyinka caanaha.
Markay noqoto xoolaha, waxaan mar walba ka fekereynaa sida loo fududeeyo qiimaha iyo kharashka waqtiga si loo helo natiijo fiican mustaqbalka. Laakiin badanaa natiijo fiican ayaa ah natiijada qoysaska aadka u daran, marka noocyo farsamooyin quudin ah, daryeel gaar ah iyo dayactir gaar ah ayaa lagu dabaqayaa xayawaanka.
Marka aad iibsato lo'da yar ama horey u ah xayawaan weyn, waxaad dhab ahaantii dooneysaa inaad natiijooyinka ku hesho qaabka hilibka iyo caanaha. Si loo helo wax soo saar ku filan, waa in xoolaha si fiican loo quudiyo. Laakiin waxaa jira noocyo badan oo ah naaxinta, mid kastoo uu leeyahay sifooyinkiisa.
Wakiilada lo'da ayaa muddo yar la qabsaday. Guryaha tuulooyinka badankood waxaad arki kartaa dhowr sac, kuwaas oo aad u jecel yihiin milkiilayaashooda. Ilaa hadda, in ka badan 1200 oo lo 'ah ayaa la diiwaan geliyey adduunka, laakiin waxaa ka mid ah kala duwanaanta caanaha, hilibka iyo caanaha, iyo xayawaanka hilibka.
Gadashada lo'da caanaha ma aha hawl fudud. Xaaladdan, waxa ugu wanaagsan in la helo xogta ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan cayayaanka ugu fiican ee lo'da loo sameeyay si gaar ah si ay u helaan caano. Waa inaad sidoo kale qiimeysaa qiyaasta mid kasta oo ka mid ah noocyada la doortay. Waxaa ugu fiican in la ogaado waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'breeds' ee shirkadaha beeraha ee degaanka ah, iyo in ay iibsadaan lo'da ee dhabta ah ee la jeexjeexay halkaas.
Lo'da kaashka ah: sida loo quudiyo xayawaanka
Ka hor intaanay iibsanin lo'da caanaha, waa lagama maarmaan in la ogaado nooca cunnooyinka loo baahan yahay in la siiyo, sababtoo ah waxay ku xiran tahay cuntada, inta badan, qadarka caanaha lagu quudin karo hal xayawaan. Nafaqada ayaa sidoo kale ka ciyaareysa door muhiim ah habka ilaalinta hawlaha taranka.
Kakhakh oo ah cadaan cad oo madax ah oo lo'da ah
Noocyada lo'da badani way badan yihiin, waana ay adag tahay in laga helo iyaga oo ku haboon dhamaan sifooyinkaaga. Xallinta hawlgalkan adag ayaa si tartiib tartiib ah, isagoo si faahfaahsan u akhrinaya sharaxaadda nuucyada ugu caansan. Waa qaybta ugu caansan oo ay ka mid yihiin lo'da nooca hilibka ee jasiiradaha cadaanka ah.
Kalmyk caleenta lo'da maanta ayaa loo tixgeliyaa in uu yahay jilida ugu fiican ee jihada hilibka. Xayawaanka Tani waxay u fiican tahay xoolaha ee gobollada leh xaalado cimilo qallafsan, laakiin sida sahlan loo daryeelo gobollada leh jawi dhexdhexaad ah. Waxay si weyn uga duwan tahay lo'da leh xididdada Yurub, tan iyo markii ay awoowayaashu yihiin lo'da.
Kala baro sifooyinka taranka iyo dayactirka cows
Dhammaanteen waxaanu caadeysnaa xaqiiqda ah in lo'da ay tahay wakiil ah lo'da. Dayactirka xayawaanka noocan oo kale ah waa arrin aad u dhib badan, maaddaama ay u baahan tahay inay bixiso aqal deggan iyo mid daaqi ah, iyo xaddiga qadarka badan. Laakiin waxa la sameeyo haddii aad rabto wax aad u badan, caano guri, jiis iyo labeen dhanaan!
Waxaa macquul ah in dhammaan lo'da caanaha lo'da ay leeyihiin sumcadda ugu sareysa. Ka dib oo dhan, xayawaankani waxay awoodaan in ay maalin kasta nagu qanciyaan kaliya dhalidda meelo, waxayna badanaa u tagaan hilibka, iyo hilibka lo'da ee laga helo iyaga ayaa sidoo kale leh qiime sare. Inta badan, cunnooyinkaas waxaa lagu beeray beero waaweyn oo caanahooda siinaya dhir waaweyn.
Aberdeen Angus oo lo'da ah
Waa arrin aad u qosol badan, laakiin sababo naga darteen waxaanu caadeysnaa inaan kala saarno lo'da aan ahayn midab, laakiin midab. Dabcan, uurjiifka khibrad leh, rafcaanku wuxuu ka hadli karaa waxyaabo badan, laakiin jacaylka jilayaasha ma noqon doono shuruud lagu qiimeeyo waxqabadka lo'da. Sidaa daraadeed, waa in la ogaadaa xayawaankan quruxda badani waa inuu ka bilaabmaa waxa uu jilicsan yahay, iyo ka dib barashada dhamaan sifooyinka caleenta, si uu uga soo baxo gabagabada ku saabsan sifooyinka xayawaan gaar ah.